Ushiswe obemsola ngokweba ingidi | Isolezwe
Ushiswe obemsola ngokweba ingidi
Izindaba / 17 April 2018, 12:25pm / BONGIWE ZUMA
KUSENZIMA ukwamukela emndenini kaMnuz Sbonelo Dlamini obulewe ngesihluku ngempelasonto. Esithombeni uNksz Zandile Dlamini ongudadewabo kamufi nonina omncane kamufi uNkk Genge Mtshali abebeduduza unina kamufi uNkk Fakazile Dlamini
UKHALA ezimathonsi umphakathi nomndeni kaMnuz Sbonelo Dlamini obulawe ngesihluku wumlisa wasendaweni ngempelasonto Isithombe: BONGANI MBATHA (ANA) AFRICAN NEWS AGENCY
UKHALA ngesihluku umphakathi waseWelbedacht West ozibonele ngamehlo umakhelwane ebhunyela owe-ANC ‘nge-acid’ maqede wamngqongqisa.
UMnuz Sbonelo Dlamini (31) obenguNobhala wophiko lwentsha lwe-ANC ku-ward 72, oshonele esibhedlela ngeSonto, kuthiwa ubephuma ukuyozijabulisa entathakusa ngoMgqibelo wabe esehlala phansi eduze komuzi kamakhelwane wakhe.
Umakhelwane (48) kuthiwa uqhamuke ngaleso sikhathi esefuna ingidi yakwakhe wazwakala exakazisa uDlamini eyifuna kuyena waze wamthembisa ukumshisa.
Umakhelwane ozibonele kwenzeka lokhu, uNksz Philiswa Ngwenya, uthe bathathe ngokuthi uyamdlalisa futhi umthela ngamanzi.
“Ngivuse umakhelwane ngoba nginenkinga sixabana nomyeni wami. Ngesikhathi efika ngiyomvulela isango simuzwe emfuna ukhiye maqede wangena endlini wabuya esemthela ngento engamanzi. Asizange sinake siqale ukuthuka sesizwa ekhala esemulayithe ngomentshisi. Sizamile ukumcisha savusa nabanye omakhelwane kodwa kwasho ukuthi bese eshe kakhulu. Kodwa ukwazile ukufinyelela kubo. Nathi sicishe salimala ngoba ubengafuni simcishe emva kokumshisa,” kusho uNksz Ngwenya.
Umndeni kaDlamini uveze ukuthi awusikhathalele kangako isigwebo samaphoyisa ngoba ngeke isabuya indodana yawo.
UNksz Zandile Dlamini ongudadewabo kamufi uthe okubuhlungu kakhulu ezinhliziyweni zabo wukuthi amaphoyisa awazange azwelane nabo ngesikhathi efika endaweni yesigameko.
“Sayibiza i-ambhulensi yangafika, sacela amaphoyisa asilekelele ukuze kusheshe kodwa anqaba asitshela ukuthi akuwona umsebenzi wawo. Size sasizwa yimoto elindwe isuka eManzimtoti. Kodwa asibambe gqubu sizokhuleka kudlule nomsolwa uma ededelwa sizokwamukela. Okubuhlungu wukuthi umfowethu ushone ebalisa engazi ukuthi ubemfanisa nobani. Nengidi abemsola ngokuyeba itholakale eduze nesango lakwakhe,” kusho uNksz Dlamini.
Amalungu omphakathi atuse uDlamini ngokuba nobuntu nomoya ophansi njengoba kuthiwa ubedume ngokulunga kule ndawo.
Umndeni nawo ukugcizelele lokhu wathi noma ebekwipolitiki kodwa ubengenazo izitha.
Umsolwa kuthiwa ulanyulelwe uNksz Dlamini umphakathi usho ukumbulala ngezandla emva kokungqongqisa nomuzi wakhe ngempelasonto.
Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uCaptain Nqobile Gwala, usiqinisekisile lesi sehlo.
“Amaphoyisa aphenya icala lokubulala emva kokushiswa kowesilisa. Ushone emva kokuphuthunyiswa esibhedlela. Umsolwa uboshelwe icala lokubulala, uzovela enkantolo kuleli sonto,” kusho uCaptain Gwala.